Filoha Rajoelina nizara « PPN » tany Nosy-Be : « Hisitraka tohana sosialy avokoa ny tokantrano iray tapitrisa » | NewsMada
Filoha Rajoelina nizara « PPN » tany Nosy-Be : « Hisitraka tohana sosialy avokoa ny tokantrano iray tapitrisa »
Niverina tao Nosy Be indray ny filoha Rajoelina Andry, afakomaly. Nambarany fa mijery ny vahoaka malagasy ny tenany ary hitondra fanampiana koa. Hisitraka izany ireo tanàn-dehibe maromaro.
«Tsy mamela irery ny vahoaka ny mpi­tondra. Fa­nom­bohana ihany ny fizarana kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro (PPN) teto Nosy Be. Hisitraka io to­hana sosialy io koa ny tokantrano miisa iray tapitrisa manerana ireo tanàn-dehibe amin’ny faritany», hoy izy. Nanolotra fanampiana ho an’ny mponina tany an-toerana ny tenany tamin’izany ka nisitraka izany ireo fokontany miisa 42. Ahitana vary iray gony, menaka roa litatra sy siramamy iray kilao izany tohana izany. Nanterin’ny filoha fa tsapany ny fahasahiranan’ny vahoaka miatrika ny voka-dratsin’ny covid-19.
Fampitaovana ny hopitaly hiatrehana ny covid-19
Tsy niandry ela koa fa tonga tao amin’ny Centre Hospitalier de référence du district – CHRD Nosy Be ireo fitaovana fanaovana «ra­diologie numérique», araka ny efa nampanantenainy, ny fiandohan’ny herinandro teo. Efa tamin’ny taona 1970 tany ny fitaovana fitarafana hampiasaina ao an-toerana ary tsy mahavita ny asany ara-dalana intsony.
Anisan’ny tena ilaina amin’ny fiatrehana ny aretina covid -19 ny «radiologie nu­mérique», hahafahana ma­mantatra raha toa ka efa na­hakasika ny tratran’ny marary iray ny tsimokaretina na tsia. Antony nanaovan’ny filoha ho laharam-pahamehana ny fampitaovana ny hopitaly izany. Tsy vitan’izany fa tonga koa ny fiara fitaterana marary nampanantenain’ny filoha.
Hanaraha-maso ireo marary
Anisany mampitaraina ny mpiasan’ny fahasalamana ny tsy fahampian’ny fiara ilaina mitatitra marary sy hivezivezena amin’ny asa fitsaboana. Eo koa ny fandehanana manao fanaraha-maso ny fivoaran’ny fahasalaman’ny mararin’ny covid-19, indrindra ireo mbola manaraka fitsaboana any an-tokantrano. Mbola nampanantena ny filoha fa ho avy koa ny fiara tsy mataho-dalana, ahitana ireo fitaovana famonjena marary. « Hohavaozina tanteraka ny CHRD eto Nosy Be. Toerana anisany mahasarika mpizahatany maro i Nosy- Be ka mendrika asiana toeram-pitsaboana manaraka ny fenitra », hoy izy.